HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA86 ChinaNy lalamby farany tany Sina dia Vita tamin'ny dia iray
Ny lalamby farany tany Sina dia Vita tamin'ny dia iray
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline 0
c km ny gara vita tamin'ny indray mandeha
Tany China, ny lalamby voalohany, izay namboarina hitaterana arina avy any avaratra mankany amin'ny faritra atsimo ary vita tamin'ny indray mandeha, dia tamin'ny fomba ofisialy.
Ny lamasinina 10 an'arivony taonina mahery avy amin'ny tanànan'i Hole Baoji ao Inner Mongolia ka hatrany Ji'an, faritany Jiangxi, dia nampidirina tamin'ny fomba ofisialy an'i Shina, izay namita ny fananganana azy indray mandeha.
Ny lalambe 813 kilometatra an'arivony dia mandalo ao amin'ny faritr'i Mongolia any Sina ary ny faritany Sha'anxi, Shanxi, Henan, Hubei, Hunan ary Jiangxi. Ny tetikasa ihany koa no lalamby farany lava indrindra eto an-tany. Ny lalamby dia manan-danja amin'ny fitaterana arina avy any avaratra mankany amin'ny faritra atsimo ary ny fitsinjarana angovo ho an'ny firenena.
Ny mpandeha 419 dia hoentina any Ankara-Istanbul ao YHT 27 / 07 / 2014 Ny mpandeha 419 dia halefa any Ankara-Istanbul ao YHT, indray mandeha: Ny mpandeha 40 dia afaka mitondra amin'ny fotoana rehetra amin'ny lamasinina avo lenta izay hitondra an'i Ankara-Istanbul mandritra ny adiny telo sy ny 419 minitra. Hisy karazany efatra amin'ny tapakila amin'ny fiarandalamby enina. Ny seranam-piaramanidina avo lenta Ankara-Istanbul, izay hampihenana ny halavan'i Ankara sy Istanbul hatramin'ny telo minitra minitra 40, dia nisokatra. Ny kilaometatra 533 kilaometatra Ankara-Eskişehir an'ny kilometatra kilometatra Ankara-İstanbul YHT kilometatra 245 dia napetraka tao amin'ny 2009. Ankara-Istanbul YHT amin'ny sehatra voalohany, Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze ary Pendik dia hijanona sivy. Ny fiatoana voalohany dia i Pendik eo amin'ny sehatra voalohany ary avy eo ny station Söğütlüçeşme ...
Adapazarı Express mitondra mpandeha 400 amin'ny iray 05 / 01 / 2015 Adapazari Express 400 mpandeha mitondra indray mandeha: eo ho eo 3 taona lasa izay, fotoana nijanona Adapazari Express, rehefa ela fiatoana izay naharitra, nanomboka sidina avy any amin'ny hamarana-and- noho ny avo hafainganam-pandeha fiarandalamby tsipika fanorenana 3 taona lasa izay, fotoana nijanona Adapazari Express, dia nandefa sidina toy ny amin'izao andro izao. Adapazarı Express, lala-mavesin'ny saran-dalana miampy an'i Sakarya-Izmit sy Istanbul, dia nanohy ny fiaramanidina tamin'ny fanatontosana asa fitaterana haingam-pandeha. Talohan'ny nanombohan'ny 12 niala ny fahatongavan'i 12, na ny 4 androany vao tonga ny fahatongavan'i 4 dia napetraka tamin'ny totalny 8 Expedition. ANY 3 dia hijanona amin'ny ADAPAZARI EXPRESS afa-tsy şimdilik
Ho avy ny Adana Subway amin'ny fotoana iray 03 / 03 / 2019 Ny Ben'ny tanànan'ny tanànan'i Adana sy ny filoham-pirenena Alliance Adana Metropolitan Kandidà Hüseyin Sözlü dia nihaona tamin'ireo mponin'i Beyazevler Neighborhood. Manohy ny fizotry ny 5 mandritra ny taona manontolo ao Adana, ny foibem-pampana fanarenana, izay maneho fa miezaka ny hahatonga ny Filoha Huseyin Verbal tsara ry zareo. Manantena aho fa hanana fahafahana hahatratra ny andaniny rehetra amin'ny fotoana iray miaraka amin'ny rafitra fitaterana an-dalamby, hoy izy. Oral, "Ny tetezana voalohany an'ny tanàna an'arivoarivony dia Taşköprü, ny faharoa dia ny tetezana lehibe, ny iray hafa dia ny tetezin'i Mustafa Kemal Pasha mandritra ny Selahattin Colak. We, 10, dia mihoatra ny tetezana telo ao Bosphorus ary iray amin'ireo tora-pasika Gulf Pass, ny iray aminareo dia eo akaikinareo mandritra ny taona.
Ny tanànan'i Metropolitan Istanbul dia mikasa ny hametraka sehatra metro tsirairay avy ao amin'ny 2013 05 / 07 / 2012 Ny Metro miasa ao Istanbul dia mitohy haingana. Na dia notontosaina tao amin'ny tsipika Kartal-Kadıköy aza ny fizotry ny fanandramana, ny metro voalohany an'ny Anatoliana, dia nanomboka ny tsanganasa fanorenana ny Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy. 29 Oktobra Miaraka amin'ny Marmaray nikasa ny hisokatra amin'ny 2013, dia ho vita ao amin'ny tanàna ny tetezana fanorenana lava. Ny tanànan'i Istanbul Metropolitan (IMM) dia manatanteraka ny fanorenana ny tsipika dia nomanina hanompo tsirairay avy ao amin'ny 2013. Ao anatin'ireo asa izay hampitombo ny km 30 amin'ny làlan'ny lamasinina dia ny Haliç Metro Crossing Bridge, Bus Station-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy, metatra Kartal-Kaynarca sy Yenikapı fifandraisana. Ao amin'ny 2003, ny fananganana ny IETT, ny tobim-pampandrosoana bus-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy, dia natomboka tamin'ny 2008. Ny fanokafana ny tsipika amin'ny 89 isan-jato dia nahavita ny 5.
Tarika tokana tokana vitsivitsy avy amin'ny tetikasa Black Sea Business World Samsun Sarp Railway Project 30 / 12 / 2012 Tarika tokana tokana vitsivitsy avy amin'ny tontolon'ny Business Black Sea Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ary Hopa filohan'ny tarika iombonana TSO. Ny filoham-pirenen'i Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ary Hopa TSO, miasa ao amin'ny Faritr'i Black Sea, dia miara-miasa amin'ny ezaka iombonana hanombohana ny tetikasam-pitrandraon-tsambo eny an-dalana avy ao Samsun mankany Sarp. Ny filohan'ny TSO dia nilaza fa raha te-hampivelatra sy hanao fihetsika ny faritra dia mila ilaina ny mandroso tanteraka, fa tsy faritany faritany, ho an'ny lalamby izay handrakotra ireo faritany rehetra manerana ny morontsiraka. Ny fijerin'ireo filoham-baovaon'ny TSO momba ny tetikasa Railway Samsun-Sarp dia toy izao manaraka izao; MURZİOĞLU: AHOANA IANAO ...
Afo tao amin'ny tobin'ny lamasinin'i Jeddah
Fitakiana mahatsiravina momba ny lozam-piaran-dalamby Bilecik!
Ny mpandeha 419 dia hoentina any Ankara-Istanbul ao YHT
Adapazarı Express mitondra mpandeha 400 amin'ny iray
Ho avy ny Adana Subway amin'ny fotoana iray
Ny tanànan'i Metropolitan Istanbul dia mikasa ny hametraka sehatra metro tsirairay avy ao amin'ny 2013
Tarika tokana tokana vitsivitsy avy amin'ny tetikasa Black Sea Business World Samsun Sarp Railway Project
Fientanentanana lehibe ho an'ny tsipika lava lava indrindra eto an-tany
Yılmaz Özdil avy amin'ny TCDD noho ny fiarandalamby haingam-pandeha tamin'ity indray mitoraka ity
Pamukkale Express 7 avy hatrany taorian'ny taona maro
İZBAN tsy misy fe-potoana ho an'i Torbalı indray mandeha